Tag: varotra fifandraisana | Martech Zone
Tag: varotra interactive
7 Antony mahatonga ny formes pimaty maty
Alatsinainy Janoary 30, 2017 Sabotsy, Janoary 28, 2017 Muhammad Yasin
Na ny mpivarotra nomerika na ny fivarotana biriky sy rihitra dia eo am-pitadiavana fomba vaovao sy vaovao hisamborana fitarihana maro kokoa ary hamadihana azy ireo ho mpanjifa mandoa vola. Ny filazana fa fanamby lehibe io dia mety ho fanalam-baraka be loatra, satria ny fahatongavan'ny internet dia nahatonga ny fifaninanana ho matanjaka ho an'ny indostria rehetra eritreretina. Nandritra ny taona maro dia nametraka endrika "Mifandraisa aminay" ao amin'ny tranonkalany ireo mpivarotra am-ponja miaraka amin'ny fanantenana ny hifandraisan'ny mpitety tranonkala liana
Alatsinainy, Septambra 10, 2007 Alakamisy, Jona 11, 2015 Douglas Karr
Ry namana tsara, Pat Coyle, manontany hoe: Inona no atao hoe Marketing Interactive? Wikipedia dia manana izao famaritana manaraka izao: ny Marketing Interactive dia manondro ny fironana mivoatra amin'ny marketing izay niovan'ny marketing tamin'ny ezaka mifototra amin'ny fifanakalozana ka hatramin'ny resaka iray. Ny famaritana ny varotra ifanakalozana dia avy amin'i John Deighton ao Harvard, izay nilaza fa ny marketing marketing dia ny fahaizana miresaka amin'ny mpanjifa, tadidio izay nolazain'ny mpanjifa ary miantso ny mpanjifa indray amin'ny fomba maneho fa tadidintsika izay